Koety: Mandria Am-piadanana ry Ahmad AlRubi’e · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Febroary 2019 8:47 GMT
Mitomany ny fahalasanan'ilay avara-pianarana mpitarika sady mpanao politika, Dr Ahmad AlRubi'e, ireo bilaogera Koetiana. Maro ireo bilaogera namoaka fiaraha-miory tamin'ny fianakaviany tao ami'ny bilaogin-dry zareo ary ny sasany tamin'ireo nanoratra tamim-pirehetampo fatratra momba ny fifandraisan-dry zareo taminy.
Miresaka momba an'i AlRubi'e i Krakatoa q8 anatin'ity lahatsoratra ity:
Mbola tsaroako foana ny fiarahanay, niaraka tamina vondronà tanora manam-pahalalana, nipetraka nanodidina afon-dasy tany amin'io toerana lavitra io. Mbola tsaroako ireo teninao, sy ny torohevitrao ho anay. Nihaino ny teninay izay feno tsy fivakisan-doha sy halahelo ho an'i Koety ianao; nihaino ianao ary nanome fanantenana anay; ary nahatonga anay hahita ny fanantenana manodidina anay ianao.
Mbola tsaroaka ireo adiko taminao sy ny hatezerako taminao ary mbola tsaroako ny ezakao nampitony ahy kanefa tsy nahomby. Nandao anao aho, ary nampifanalavitra antsika ireo taona sy ireo toejavatra niainana. Mbola nanaraka anao avy lavitra aho ary namaky izay voasoratrao. Eny, nandinika saingy tamin-kalahelo ireny andro manga ireny aho.. kanefa ao am-poko mandrakariva ianao ry Dr Abu Qutaiba, Ahmad AlRubi'e
Manoratra momba ny fifandraisany tamin'ny Dr AlRubi'e ihany koa i Enter-q8. Hoy izy:
Tia an'i Koety avokoa isika rehetra. Samy tia azy amin'ny fombany manokana ny tsirairay, fa amin'ny farany dia mampiray antsika rehetra ny fitiavany. Rehefa tia zavatra iray ianao, mitia anarana, na dian-javatra, na teny – teny iatoanao ary vakianao isaky ny litera, isaky ny teny, isaky ny fehezanteny. Any am-parany, mijanona ianao ary manontany izay nirakitra am-penina ireo soratra ireo. Tsy mety, eny, tsy mety izany. Izany no nampianarin'ity lehilahy niavaka ity antsika.
Mety tsy hiombon-kevitra amin'ilay mpanoratra ianao noho ny fahazarana, ny fitondrantena, ny firehana, na ny fotokevitra mihitsy aza. Izany no fomba nitenenan'i Abu Qutaiba ilay izy ary nilaza zavatra maro tsy hay adinoina izy. Niara-niasa taminy aho nandritra ny fifidianana voalohany taorian'ny fanafahana an'i Koety. Ho an'i Koety isika rehetra, aleo mba ho antsika rehetra koa i Koety.
Rehefa nifindra tany Mishref izahay (ilay fari-piadidiana nirotsahan'i AlRubi ho fidiana), nitaingina kamiao niaraka tamin'ireo mpiasa izahay, nizara trakta momba ny fifidianana. Tsy masoivoho mpanao dokambarotra akory izahay fa tanora Koetiana fotsiny ihany, ary niaraka taminay i Abu Qutaiba. Nandalo teo alohanay ireo fiara rehefa misy jiro mandrindra ny fifamoivoizana ary nihiaka ireo mpitondra azy ireny hoe: “Mpandresy ianao ry Abu Qutaiba! Mpandresy!” Mbola tsaroako foana ilay vavy antitra Bédouine nikiakiakaI raha izahay niala ny dewaniya (efitrano fivoriana) iray tao Koety:
“Dr, raha afaka nifidy izahay, nifidy anao!” hoy izy.
Raha fintinina, lehilahy tian'ny rehetra tao Koety izy – na ireo Siita, na ireo Sionita, na ireo bedouins sy ireo mponina an-tanàn-dehibe ary koa ny governemanta sy ny mpanohitra.
Avy amin'ny fo, Mandra-pihaona ry Abu Qutaiba.
Mamoaka fahalalana vitsivitsy momba ny Dr Ahmad AlRubi'e i Ansam ao amin'ny Gather ye rosebuds while ye may. Manoratra izy:
Ny alina lasa teo, namoy ny iray tamin'ireo lehilahiny malaza i Koety! Mpanao politika, mpanabe, akademisiana, zoky mpiahy, mpanoratra mahatalanjona, ary namana lalain'ny maro. Lehilahy tian'olona maro! Lasana izy saingy tsy nandao antsika! Hotsaroan'ny maro amintsika foana izy!
• Teraka tamin'ny taona 1949.
• Nivoaka avy ao amin'ny Anjerimanontolon'i Koety tamin'ny taona 1976 – Sampana Filozofia.
• Nahazo ny maripahaizana Doctorat tamin'ny taona 1984 – tao Harvard.
• Mpikambana tao amin'ny Filankevitra tamin'ny 1985.
• • Mpikambana tao amin'ny Filankevitra tamin'ny 1992.
• Minisitry ny Fampianarana sy ny Fampianarana Ambony – 1992 – 1996.
• Mpikambana tao amin'ny Filankevitra tamin'ny 1999.
• Mpikambana mavitrika tao amin'ny Gazety – Al Seyasa – Al-Watan – Al-Qabas – Middle East
Tompon'ny sary: Shurouq